သင်တစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးသွားသည့်အခါဖြစ်ပေါ်လာရသောပထမဦးဆုံးမေးခွန်းညာဘက်အဝတ်ကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လို? ဤသည်ကိုကြိုတင်စဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်။ တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင့်ရဲ့ image ကိုဖန်တီးရန်ကတိထားတော်မူသောသင်တို့ဓာတ်ပုံဆရာ superprofessional, လျှင်, image ကိုဖန်တီးသောအခါကနေရှေးခယျြဖို့အများကြီးရှိသေးကြောင်း, တတ်နိုင်သမျှသင်၏အဝတ်ကိုရောက်စေဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဘို့အဝတ်အမျိုးမျိုး options များစဉ်းစားပါ။ တဖန်သင်တို့ကိုမိမိတို့အဘို့ကိုအကောင်းဆုံး option ကိုရွေးချယ်ဖို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံကိုအညွန့်အဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ ဝတ်စုံအများအားဖြင့်ဂန္ဒအမျိုးအစားမှစွပ်စွဲနှင့်ဂန္စတိုင်အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ဓာတ်ပုံများတွင်အများဆုံးမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ သင်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်း site ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးလုပ်ဆောင်သွားရန်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင်ကဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့ pantsuit သို့မဟုတ်စကတ်ကိုဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ၏သင်တန်းကျနော်တို့တပြင်လုံးကို ensemble ဿုံသင်တို့အပေါ်မှာထိုင်သင့်ကြောင်းသတိရရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းဝတ်စုံကိုအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး၏နောက်ထပ်ဂျလျော့နည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ, ဖက်ရှင်စတိုင်ဝတ်စုံကိုရိုက်ကူးဖို့ထိုကဲ့သို့သော swimsuit သို့မဟုတ်အားကစားရုံဖိနပ်အဖြစ်ဥပမာက c ထင်ရသောကနဲ့ပေါင်းစပ်ကြသည်မဟုတ်သောအရာတို့ကို, နဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
frame ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာတဲ့ဝတ်စုံကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ခြေအိတ်ပေါင်းထည့်လိုလျှင်, ပေါ့ပေါ့ဆဆထို့နောက် image ကိုတစ်ဦးအလွန်စားပြီးနှင့် seductive ရလည်စည်းနှင့်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် knotted ။
သငျသညျဓာတျပုံအညွန့်အဘို့အဆင်မြန်းရှေးခယျြခဲ့လြှငျ, ဒီမှာအဓိကအရာ attribute တွေနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူက overdo သည်မဟုတ်။ မြင့်မားသောဒေါက်ဖိနပ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အနည်းငယ်အနက်ရောင်ဝတ်စုံပေါ်တွင်တင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အလှဆင်ဒြပ်စင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအတူအလှဆင် frilly ဆင်မြန်း, ရှေးခယျြမနေပါနဲ့ - နှင့်ကမ္ဘာထဲမှာအများဆုံးဖက်ရှင်နှင့် sexy ပုံရိပ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်မိသားစုဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးအဝတ်အစားတူညီစတိုင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အဝတ်အစားများပါဝင်သည်သငျ့သညျအဘို့, ကအရောင်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးများအများဆုံးအဆင်ပြေခြင်းနှင့်ထိုသူတို့အဘို့အဆင်ပြေရာရာ၌ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ နှင့်မိခင်များကအရမ်းဖန်စီတစ်ဦး Mini-စကတ်သို့မဟုတ်စားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းသတိရသင့်တယ်။ အဆိုပါလျော့နည်းအာရုံကိုအဝတ်အာရုံ, ပိုမိုလှပတောက်ပဓာတ်ပုံ၏သူရဲကောင်းများကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမည်။
ဆောငျးရာသီအဝတ်အစားများအတွက်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးတောက်ပဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါပုံရိပ်ဿုံတစ်ဦးပဝါကိုဖြည့်, လက်အိတ်များနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်တဦးတည်းအရောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ နွေး - ပင်မအုပ်ချုပ်မှုကိုအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ရိုက်ကူးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဘို့မတ်မတ်လှပအဆင်ပြေပေမယ့်လည်းအတော်လေးနွေးမသာဖြစ်သင့်သည်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့အပြင်အမှုအရာကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များနှင့် Self-ယုံကြည်မှုယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကင်မရာမှာပြုံးနေ - နှင့်ဓာတ်ပုံ၌သင်တို့၏အပြုံး, သင့်ရှည်လျားပျော်ရွှင်အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်လှပသောမှတ်ဥာဏ်ရှိနေပါဦးမည်။
Turtleneck ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အလှဆုံးလူကို 2014 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလား
လှပသောအဝတ် - တိုင်းအရသာများအတွက်အများဆုံးစတိုင်စကတ်၏ဓါတ်ပုံများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး
စင်းဘောင်းဘီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ပင်လယ်ဓားပြပါတီ - မိန်းကလေးဝတ်စုံ
ကြက်သားအဘို့ငံပြာရည် - စာရွက်
အိမ်မှာအခြေအနေများအတွက် Hydroponics - စတော်ဘယ်ရီ
ဝက်သားနှလုံး - ချက်ပြုတ်နည်းများ
သမိုင်းပြန်လုပ်ပါဘူး: တစ်ခါသာဖြစ်ပွားခဲ့သည် 16 ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များ
Celine Dion ၏ကလေးများ
Marjoram နှင့်အတူလက်ဖက်ရည် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
ဂေါ်ဖီထုပ် - ရောဂါ, ပိုးမွှားနှင့်သူတို့၏ထိန်းချုပ်မှု
Soda ဗတ် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ဓာတ်ပုံ 35 ထိထိမိမိအချိန်လေး
ထိုင်းကြောင် - ဖောက်ဖော်ပြချက်, ဇာတ်ကောင်